ConnMan, serivisy hitantanana fifandraisana Internet novolavolain'i Intel | Avy amin'ny Linux
ConnMan, serivisy fitantanana fifandraisana Internet novolavolain'i Intel
ConnMan dia serivisy iray tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny Internet ao anatin'ny fitaovana tafiditra ary mampifangaro karazana fifandraisana izay mizarazara amin'ny demonia maro, toy ny DHCP, DNS ary NTP. Ny valin'ity fanamafisana ity dia ny fanjifana fahatsiarovana ambany miaraka amina fanehoan-kevitra haingana, tsy miova ary mifangaro amin'ny fiovan'ny toetran'ny tamba-jotra.
ConnMan Izy io dia rafitra maodely tanteraka izay azo hitarina, amin'ny alàlan'ny accessories, hanohanana ireo karazana teknolojia tariby na tsy misy tariby. Ny fomba plug-in dia mamela ny fampifanarahana mora sy fanovana ho an'ny tranga fampiasana isan-karazany. Nampiasaina tamin'ny rafitra fananganana Yocto namboarina, Izy io dia ampahany amin'ny famaritana infotainment amin'ny fiara GENIVI, telefaona miorina amin'ny Jolla / Sailfish, Nest, Aldebaran Robotics ary ireo mpandrakitra horonantsary manokana (PVR) an'ny Linux.
Ity serivisy ity dia tetikasa voalohany naorin'ny Intel sy Nokia tamin'ny voalohany Nandritra ny fampandrosoana ny sehatra MeeGo, avy eo ny rafi-pandaminana tambajotram-pifandraisana ConnMan dia nampiasaina tamin'ny sehatra Tizen sy fizarana sy tetikasa manokana, ary koa fitaovana ho an'ny mpanjifa isan-karazany miaraka amin'ny firmware misy ny Linux.
Singa iray lehibe amin'ny ConnMan ny fizotran'ny fifandraisana connmand, izay mitantana ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra. Ny fifandraisana sy ny fanajariana ny karazana subsystem an'ny tambajotra dia atao amin'ny alàlan'ny plugins.
Ohatra, misy plugins ho an'ny Ethernet, WiFi, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, VPN (Openconnect, OpenVPN, vpnc), PolicyKit, mandray adiresy amin'ny alàlan'ny DHCP, miasa amin'ny alàlan'ny lozisialy proxy, manamboatra ny fehin-kevitra DNS ary manangona statistika.
Ho an'ny fifandraisana amin'ny fitaovana, ampiasaina ny subsistem Linux kernel netlink, ary ho an'ny fifandraisana amin'ny rindranasa hafa dia ampitaina amin'ny alàlan'ny D-Bus ny baiko. Ny mpampiasa interface sy ny lojika fanaraha-maso dia misaraka tanteraka, ahafahanao mampiditra ny fanohanana ConnMan amin'ireo configurator efa misy.
ConnMan dia manana fanohanana izao ireto teknolojia manaraka ireto:
WiFi miaraka amin'ny fanohanan'ny WEP40 / WEP128 sy WPA / WPA2
Bluetooth (mampiasa BlueZ)
2G / 3G / 4G (mampiasa oFono)
IPv4, IPv4-LL (rohy eo an-toerana), ary DHCP
Fanohanana ho an'ny ACD (Detection Conflict Detection, RFC 5227) hamantatra ireo adiresy adiresy IPv4 (ACD)
Tunnel IPv6, DHCPv6 ary 6to4
Fandehanana mandroso sy fanamboarana DNS
Ny proxy DNS sy ny rafitra fitetezana cache namboarina ho an'ny valinteny DNS
Rafitra namboarina hamantatra ny masontsivana fidirana sy vavahadin-tranonkala fanamarinana ho an'ireo teboka fidirana tsy misy tariby (teboka fidirana WISPr)
Faritra sy ora fametrahana ny faritra (manual na via NTP)
Fitantanana asa amin'ny alàlan'ny proxy (manual na WPAD)
Fomba fametahana mba handaminana ny fidirana tambajotra amin'ny alàlan'ny fitaovana ankehitriny. Fanohanana amin'ny famoronana fantsom-pifandraisana amin'ny alàlan'ny USB, Bluetooth ary Wi-Fi
Fanangonana statistika amin'ny antsipiriany momba ny fanjifana ny fifamoivoizana, na dia samy manana ny kaonty manokana momba ny asa ao amin'ny tambajotra an-trano sy amin'ny fomba mandeha aza
Fanohanana fanodinana background PACrunner ho an'ny fitantanana proxy
Fanohanana PolicyKit amin'ny fitantanana ny politika fiarovana sy fidirana.
Ny kaody tetikasa dia zaraina eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPLv2.
1 Momba ny kinova vaovao an'ny ConnMan 1.38
2 Ahoana ny fametrahana ConnMan amin'ny Linux?
Momba ny kinova vaovao an'ny ConnMan 1.38
Ity kinova vaovao an'ny ConnMan 1.38 tonga taorian'ny fampandrosoana efa ho herintaona, Miaraka amin'izany miavaka ny famoahana vaovao amin'ny fanomezana fanohanana VPN WireGuard sy Wi-Fi daemon IWD (iNet Wireless Daemon), novolavolain'i Intel ho safidy maivana kokoa amin'ny wpa_supplicant, mety amin'ny fandaminana ny fifandraisana amin'ny rafitra Linux tafiditra ao anaty tamba-jotra tsy misy tariby.
Ahoana ny fametrahana ConnMan amin'ny Linux?
Ho an'ireo izay liana amin'ny fametrahana ity mpitantana fifandraisana Internet ity amin'ny rafitr'izy ireo dia azon'izy ireo atao izany amin'ny fanarahana ireo torolalana zarainay etsy ambany.
Izao dia izao, raha afaka mametraka ny kinova vaovao 1.38, azo atao ihany izany, misintona ny kaody loharano izany ary ny fanaovana ny fanangonana.
Mba hahazoana ilay fonosana, amin'ny terminal dia hasiantsika ity baiko manaraka ity:
Izahay dia mamaha ny fonosana amin'ny:
Ampidirinay miaraka amin'ny:
Ary manao ny fanangonana miaraka amin'ny:
ankehitriny ho an'ireo izay maniry ny hametraka ilay fonosana izay ao anatin'ny tahiry fizarana azy ireo, karohy fotsiny izy miaraka amin'ny manager anao fonosana.
Fametrahana ao Ubuntu, Debian, Raspbian na distro hafa azo Amin'ireto, ireto dia miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Ao amin'ny Arch Linux, Manjaro, Arco na derivative hafa:
Ao amin'ny Fedora, CentOS, RHEL, na ny derivatives:
Amin'ny kinova openSUSE rehetra:
Finalmente hahalala bebe kokoa amin'ny lalina ny fomba fikirakirana an'ity serivisy ity dia azonao atao ny manontany ireto manaraka ireto rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » ConnMan, serivisy fitantanana fifandraisana Internet novolavolain'i Intel
Dudi dia hoy izy:
Salama Fa raha apetrakao ity dia mila esorina ny tambajotra-manager ve sa tsy ilaina izany?
Mamaly an'i Dudi
Raha ny marina dia sendra an'i ConnMan aho satria tao anaty kahie dia tsy nanomboka ny serivisy Network Manager ary hisorohana ny fandaniana fotoana be loatra amin'ny famahana ny olana, nisafidy ny hitady fomba hafa fotsiny aho, izay tsy tiako fotsiny ny wicd, miampy taona maro lasa izay dia nisy zavatra niainako ratsy satria tsy nitahiry ireo fanovana.
Saingy, mamaly ny fanontanianao dia tsara kokoa ny tsy manana serivisy tokana ary hisorohana ny fifanolanana. Raha hampiasa ConnMan ianao dia tsara kokoa ny manaisotra ny Network Manager na mpitantana fifandraisana hafa izay anananao ary raha tsy maharesy lahatra anao izy dia esory ary avereno miaraka amin'ilay notantaninao.
Mutter sy metacity: mpitantana varavarankely ho an'ny tontolo Desktop